Maxaa ka jira in finalka koobka horyaallada Yurub Sansiro lagu qaban doono? | Gool FM	Friday, February 12th, 2016	Home
Maxaa ka jira in finalka koobka horyaallada Yurub Sansiro lagu qaban doono?
(Milano) 06 Dis 2012 Waxaa jira warar soo baxaya oo tibaaxaya in dhamaadka koobka horyaallada Yurub dufcaddiisa 2016-ka lagu qaban doono gegada caanka ah ee Stadio Giuseppe Meazza ama San Siro ee magaalada Milano ee woqooyiga Talyaaniga.
Warbaahinta Talyaaniga ayaa kalsooni ku qabta inuu heshiiskani dhamaystiran yahay horraanba waloow aan lagu dhawaaqi karin bisha Maarso ee sanadka soo aadan kahor.
Waxay noqon doontaa markii 4-aad ee finalka koobka Champions League lagu dhigo San Siro oo sidoo kale martigeliyay 1965-kii oo ay Inter 1-0 uga badisay Benfica, 1970-kii oo ay Feyenoord 2-1 iskaga reebtay Celtic iyo 2001-dii oo ay Bayern Munchen rigoore ku khaarajisay kadib markii ay waqtigii caadiga ahaa 1-1 ka badan dhalin waayeen.
Dhamaadka 2015-ka ayaa isaga lagu qaban doonaa magaalada Berlin ee caasimadda Jarmanka midoobay.
Wararka	Hordhaca kulanka horyaalka Soomaaliya: Singjet iyo Horseed oo galabta ku ballansan garoonka Banaadir!
(Muqdisho) 12 Feb 2016 Kooxaha Singjet ayaa galabta la ...	Roma oo war farxad leh helaysa ka hor kulanka Real Madrid
(Roma) 12 Feb 2016 Kooxda Roma ee dalka talyaaniga ...	“Man United waa inay ii sheegaan haddii ay raadinayaan badalkayga” – Van Gaal oo ka hadlay arinka Mourinho!
(Manchester) 12 Feb 2016 Wax qarsan ma ahan in ...	PSG oo mushaar waali ah u soo bandhigaysa Neymar si ay uga faramaroojiso Barcelona!
(Paris) 12 Feb 2016 Kooxda reer France ee PSG ...	DAAWO: ilayn ciyaartoyda Arsenal iyo tababare Wenger way ku fiicanyihiin jiliinka (Arag Xayaysiintii ay ka sameeyeen safarka USA, Kaka iyo Henry ayaa ka soo muuqday)!
(London) 12 Feb 2016 Kooxda Arsenal ayaa xalay si ...	Waa kee laacibka Real Madrid ee iska diiday Hanti fara badan oo ay u soo bandhigtay koox Shiinees ah?
(Madrid), 11 Feb 2016. -Waxaa weli si ...	Eriksson: “Ha dhowaato ama ha dheeraato waxaa la arki doonaa Ronaldo, Messi iyo Rooney oo…
(Shanghai), 11 Feb 2016. –Tababaraha kooxda Kubadda Cagta ...	Arsenal oo safar ku tegi doonta Mareykanka kulammo saaxiibtinimana ku soo ciyaari doonta
(London), 11 Feb 2016. -Kooxda Kubadda ...	SAFAFKA SERIE A: Balotello oo ciyaari kara, Dzeko oo jooga & Pjanic oo maqan, Inter oo Biabiany usoo laabtay!
(Roma) 11 Feb 2016 - Waxaan halkan idiinkugu ...	RASMI: Robinho oo ku biiray Atletico Mineiro
(Belo Horizonte), 11 Feb 2016. -Kooxda Kubadda ...	GoolFM Mobile (USA)	About usContactsWaxaan NahayNagala Soo Xiriir	Copyright © Gool FM 2016. All Rights Reserved. Hosted By Afro